पाँच हजारमा बिक्री हुने पत्रकार !
- रोशन कार्की
भनिन्छ पत्रकार समाजको ऐना । जस्तो सुकै बहुमल्य रत्न जडित ऐना हेरे पनि वास्तविकता देखाउँछ । अर्थात हेर्नेको असली रुप जो छ त्यही । त्यही भएर होला पत्रकार समाजको ऐना भनेको । यो एक ताकाभन्दा सुहाउँथ्यो ।
तर, अहिले पत्रकारभन्दा पनि दलाली र पत्रकारिताको आडमा अवैध कार्य गर्ने समूहको भीड हुनपुगेको छ ।
किनकि पत्रकारको परिचय पत्र बोकेर कतै धम्काउने, कतै समाचार र सूचना नै बेच्ने त्यो पनि पाँच सय रुपैयाँदेखि नै सुरु गर्ने महान वरिष्ठ पत्रकारहरु हाम्रो समाजमा पाइलैपिच्छे भेटिन्छन् । अनि चिया पसलमा उनीहरुकै हुँकार हुन्छ भ्रष्टाचारी, तस्करी र अनियमितता गर्नेमाथि मैले यस्तो लेखेँ उस्तो लेखँे ।
वास्तविक समाचार लेख्ने पत्रकारकै समाचारलाई आफूले लेखेको भन्दै उल्टो धम्काउने पत्रकारको खाँचो छैन हाम्रो देशमा । ९८ प्रतिशत पत्रकारहरु कि ‘र’ का ऐजेण्ट, प्रहरी, अनुसन्धान, शिक्षक, व्यापारी, ठेकेदार रहेका छन् ।
उनीहरुको मुख्य काम भनेकै पत्रकारितको नाममा रकम सङ्कलन गर्ने रहेको छ । यसैक्रममा यसरी आफ्नो पत्रकारिता बिक्री गर्ने आफूलाई ठूला मिडियाका पत्रकार हुँ भन्नेहरु पहिलो नम्बरमा रहेका छन् बिक्री हुनेमा । उनीहरुलाई धेरै रकम दिनु पर्दैन मात्र पाँच हजार रुपैयाँ दिएमा मिडिया हाउस, गोप्य सूचना सबै बेच्न तयार हुने गरेका छन् । यसरी पत्रकारलाई नै खरिद गरेर आफ्ना कालाकर्तुतलाई लुकाएर अति नै राम्रो गरेको भनेर देखाउनेमा पहिलो नम्बरमा रहेको छ आफूलाई विश्वको धनीको पगरी गुथेका विनोद चौधरीको कम्पनी चौधरी ग्रुप, गोल्छा समूह, शंकर समूह, विशाल समूह, खेतान समूह, ज्योती समूह, भाटभटेनीलगायत अग्र पङ्क्तिमा रहेका छन् ।
उनीहरुको काम गैरकानुनी कार्य गर्ने तर सोही कार्या देशहित रहेको छ भन्दै बनावटी समाचार लेख्ने हाम्रा पत्रकारमित्रहरुले पेसालाई नै धरापमा पारेर कार्य गर्दै आएको पाइएको छ ।
पछिल्लो समयमा यसरी बिक्री हुने गरेका छन् भन्ने प्रमाण धादिङको बालुबा काण्डबाट प्रस्ट भएको छ । बालुवा तस्करीसँग धादिङका १० जना पत्रकारले पैसा लिएको विषयमा अहिले देशको मौसम चिसो भए पनि पत्रकारिता जगत भने हाई भोल्टेज करेण्टझंै तातेको छ । सो बारे सामाजिक सञ्जालमा पत्रकारदेखि अन्य व्यक्तिहरुले सो विषयमा स्टाटस र कमेन्ट गरेर सार्वजनिक गरे । त्यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ पत्रकारको परिचय पत्र देखाई अवैध धन्दामा संलग्न भएका छन् भन्ने बलियो प्रमाण । यो विषयमा सबैभन्दा बढी पत्रकारहरु नै स्टाटस पोष्ट गर्न बढी सक्रिय भए ।
प्रदेश नं. ३ ले बालुवा तस्कर र क्रसर माफियालाई फाइदा पुग्ने कानुन ल्याउने तयारी गरेको सार्वजनिक भएसँगै पत्रकारलाई मासिक रकम दिने गरेको समेत सार्वजनिक भयो र हुँदैछ । यस विषयमा दियोपोष्ट डटकमले समाचार लेखे लगत्तै कान्तिपुर दैनिकका धादिङ संवाददाता हरिहरसिंह राठौरले बालुबा तस्करसँग पैसा लिने पत्रकारहरुको लिष्ट (सूची) आफूसँग छ भन्दै फेसबुकमा स्टाटस लेखे । उनले लिष्ट आफूसँग छ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा कमेन्ट गरेसँगै धादिङ जिल्लामा कार्यरत पत्रकारहरुले आ–आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरे । कसैले लिष्ट मसँग छ भन्नेहरुले नै पैसा बुझेको धारणा व्यक्त गरे भने कसैले लिष्ट भएको भए पनि सार्वजनिक नगरेको ? भन्दै प्रश्न गरे । केही पत्रकारहरुले लिष्ट आफंैले हेरेको भन्दै हरिहर सिंह राठौरसहित १० जना पत्रकारलाई ५० हजारका दरले पाँच लाख रुपैयाँ दिएको भनेर लेखिएको दाबी गरे ।
यो एउटा उदाहरण मात्र हो । तस्करसँग अवैधरुपमा रकम लिने पत्रकारहरुको तर काठमाडौंमै पत्रकारिता गर्ने नाम कलाएका पत्रकार समेत पाँच हजार रुपैयाँमा बिकेका उदाहरण हामीसमक्ष धेरै छ । केही महिनाअघि चौधरी ग्रुपको समाचार लेख्दा पत्रकारहरुबाटै धुमाउरो पारामा नलेख्न धम्की यस स्तभकारमाथि पनि आएकै हो । चोरीपैठारीको चिनीलाई नेपाली उत्पादन भन्दै महँगोमा बिक्री गर्ने शशिकान्त अग्रवाल हो भनेर समाचार लेख्दा पत्रकारमित्रहरुबाटै धम्कीपूर्ण व्यवहार मैले भोग्नु परेको छ ।
पेसा पत्रकारिता काम तस्करका ऐजेन्ट भएर बसेकाहरु धेरै छन् हाम्रो समाजमा । तस्करी र कर छलीको समाचार लेखेपछि भोलिपल्ट आफूलाई टाइकुन पत्रिका र ठूला मिडियाका कथित पत्रकारहरुले तीनै व्यापारीको प्रोफाइल लेखिन्छ । देशमा उद्योगधन्दाको नाममा करोडौं रुपैयाँ कर छली गर्ने उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्ने मन्द विष बेच्दै आएको चौधरी ग्रुपको वाइवाइ चाउचाउको समाचार लेख्दा मेरा मित्रहरुले सबैभन्दा गुणस्तर चाउचाउ छ भन्दै ५÷७ हजारमा बिक्री भई समाचार लेखे ।
अनि लगत्तै भारतको विहारमा रहेको उद्योग घुम्न गए । किनकि यहाँ पेसा देखाउने दाँत बनेको छ । काम तस्करी उपभोक्ता विरोधी गर्दै आएका छन् आफ्नो सबै धर्म नै छोडेर कमाउ धन्दामा लागेका पत्रकारबाटै आउने गर्छ घुमाउरो पारामा समाचार लेख्दा तपाईसँग प्रमाण छ ? एक पत्रकारले अर्को पत्रकारलाई गर्ने प्रश्न हो यो ? किनकि त्यो प्रश्न चौधरीका केही दलालीहरुको निर्देशनमा सोध्न लगाएको थियो । त्यस्तै चौधरी ग्रुप र चिनीको समाचार लेख्दा पनि सोही अवरोध भोग्नु परेको छ । अहिले तीनै बिक्री हुने पत्रकारहरु महान पत्रकारको पगरी गुथेर हिँड्छन् प्रत्येक महिना चौधरीको ढोकामा गएर जदौ गर्दै आफू बेचिएको रकम मासिक बुझ्दै आउने गरेका छन्. ।
यसैगरी, कपडा उद्योग चलाउने व्यवसायीले पनि चोरीपैठारी गरी नेपाल भित्राएर ठगीधन्दा गरेकै कारण नेपाली उद्योग बन्द भयो भनी समाचार लेख्दा पनि तिनै बिक्रीमा रहेका पत्रकारबाट धम्कीपूर्ण फोन आएको धेरै प्रमाणहरु रहेका छन् । एकातर्फ दलीय पत्रकार र अर्कोतर्फ बिक्रीमा रहेका पत्रकारकै कारण देशको पत्रकारिता पेसा संकटमा पर्दै गएको छ भने सबैलाई एउटै बाकसमा राखेर हेरिने गरेको छ । हुन पनि ९८ प्रतिशत पत्रकारहरुको देखाउने पेसा पत्रकारिता गर्ने धन्दा अवैध रहेको भेटिएको छ ।
समाजमा पत्रकारिताबाटै विभिन्न स्थानमा प्रवेश गर्ने गरेका छन् । उनीहरुले आफूअनुसार नभए र माग गरेअनुसार रकम नदिएमा समाचार लेख्ने दिएमा नलेख्ने समूह काठमाडौंबाटै प्रकाशन भएका मिडिया हाउसमा कार्यरत रहेका छन् । उनीहरु दुई समूहमा रहेका छन् । एक समूह दलभित्रबाट प्राप्त निर्देशन अनुसार भ्रष्टाचारको समाचरलाई नै रोक्ने र गुलामी पत्रकारिता गर्ने गरेका छन् भने अर्को समूह पैसामा बार्गेनिङ गरेर माग गरेअनुसार पाए नलेख्ने नपाएमा पत्रकारिताको धर्म र आचार संहितालाई नै उल्लंघन गरेर समाचार लेख्दै आएका छन् ।
यसरी पत्रकारहरु पाँच सयदेखि नै बिक्री हुन थालेपछि र उनीहरुको पहिचान सबैलाई थाहा हँुदासमेत पत्रकारिताको नामका लुटधन्दा चलाउनेहरुमाथि कारबाही हुने हो भने पत्रकारिता पक्कै समाजको ऐना हुने थियो । यसरी अवैध धन्दामा हौसला दिनेमा मन्त्री, सांसद, व्यापारी र सरकारी कर्मचारी नै हुने गरेका छन् ।
प्राप्त विवरणअनुसार प्रदेश नं. ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सालिकराम जम्मकट्टेलले बालुवा तस्करबाट १५ लाख रुपैयाँ दशैं खर्चबापत लिएको भन्ने बारे पनि अहिले चर्को बहस भइरहेको छ । क्रसर उद्योग सञ्चालन हुने राजमार्ग क्षेत्रकै स्थानीय र सांसदसमेत रहेका जम्मकट्टेल यसअघि पनि पटक–पटक विवादमा तानिएका व्यक्ति हुन् । क्रसर व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा उनले नयाँ कानुन कार्यविधि ल्याउन प्रस्ताव समेत संसद्मा पेस गरेका छन् ।
विशेष स्रोतका अनुसार प्रदेश ३ का क्रसर उद्योगीले जम्मकट्टेललाई रकम उठाएर नै पैसा दिएको खुल्न आएको छ । प्रदेश ३ का मन्त्री जम्मकट्टेललाई व्यवसायीहरुले करिब आठ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम बुझाएको व्यवसायीहरुको भनाइ रहेको छ । धादिङमा मात्र दशैं खर्चबापत यो वर्षको क्रसर व्यवसायीले ४७ लाख रुपैयाँ बाँडेको धादिङका पत्रकारहरुको फेसबुकमा सार्वजनिक भएको छ । सांसद तथा मन्त्री जम्मकट्टेलसँगै सोही क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सदस्य भूमि त्रिपाठीले पनि १० लाख रुपैयाँ लिएको चर्चा छ ।
यसअघि पनि क्रसर उद्योगको नाममा ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेका समाचारहरु प्रकाशित हुँदा पनि अहिलेसम्म कुनै कदम चालिएको छैन । कारण नियामक निकाय नै आर्थिक प्रलोभनमा फसेका रहेछन् । फेसबुकमा राखिएको स्टाटस अनुसार धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, एसपी र डीएसपीलाई प्रतिव्यक्ति पाँच लाख रुपैयाँको दरले क्रसर माफियाले रकम बुझाएको भनिएको छ ।
यस्तै गजुरी ट्राफिक कार्यलयलाई एक लाख रुपैयाँ दिएको पनि पत्रकार राठौरसँग भएको सूचीमा उल्लेख गरिएको छ । जय होस । karkirimn@gmail.com (जनमञ्चबाट साभार) ।